लेक ट्रिटिविया, झील ट्रिटिriva - एन्टिराबी
अफ्रिका मेडागास्कर Antsirabe
ठेगाना: लेक ट्रिटिभ, वकिंकंकरट्रा, अन्नाानारिभो प्रांत, मेडागास्कर
अधिकतम गहिराई: 150 मि
औसत गहिराइ: 80 मि
माथिको सतह माथिको सतह: 2040 मि
मेडागास्कर द्वीप के दक्षिणपूर्वी भाग में एक छोटी झील Tritriva (झील Tritriva)। यो वकिंकरंकरा प्रांत मा बेल्जाउको गाउँ नजिकैको स्थित छ।
मुख्य विशेषता र जलाशय को विशिष्टता यो तथ्य हो कि यो एक विलुप्त ज्वालामुखी को कोटर मा स्थित छ र यसको धेरै गर्म स्प्रिंग्स हो। झील समुद्री सतह भन्दा माथि 2040 मीटर को ऊंचाई मा स्थित छ, र यसको गहिराई 80 देखि 150 मीटर सम्म भिन्न हुन्छ।
Tritriva छ अद्वितीय र यहाँ सम्म कि रहस्यमय घटना, उदाहरण को लागि, सूखे अवधि को समयमा, जलाशय मा पानी को स्तर कम को बजाय बढ्छ। र यदि तपाईं पोखरीमा एक वस्तु फेंक गर्नुहुन्छ भने एक निश्चित समय पछि घाटी पत्ता लगाउन सम्भव छ। यस तथ्यबाट, वैज्ञानिकले निष्कर्ष निकालेको छ कि त्यहाँ भूमिगत स्रोतहरू र धाराहरू छन्।
स्वदेशी मान्छे भन्छन् कि पानीको निकाय यसको रूपले अफ्रिकाको एक अन्तबाट जस्तो हुन्छ, र अर्कोतिर - म्याडागास्करको टापु। यहाँ पानीको रंग फिरोजिस छ, तर यो सफा र पारदर्शी छ। एकै समयमा, यसले ट्रेस तत्वहरू उच्च स्तरको फास्फोरस एसिडसँग समावेश गर्दछ, र यसलाई पेय गर्न कडा रूपमा निषेध गरिन्छ।
पोखरा टाइट्रिव एक सुन्दर र असामान्य स्थान हो, जसको साथ स्थानीयहरु धेरै किंवदंतियों र विश्वासहरु संग सम्बन्धित छन्। उदाहरणका लागि, पोर्क व्यंजन खाएको मनपर्ने तालाबमा तैरने को लागी यो निषिद्ध गरिएको छ। यो शासन इस्लाम संग कुनै पनि गर्न छैन, किनभने यो विश्वास पुरातन पूर्व पूर्व इस्लाम देखि नै छ। यहां सम्म कि प्रचुर मात्रा मा बताइए कि यिनी भागहरु मा युवा प्रेमीहरु लाई अक्सर चट्टान मा पहुंचे, यदि आमाबाबु उनलाई विवाह गर्न को लागि अनुमति नहीं दिए।
जलाशय मात्र गहिरो छैन, तर ठुलो ठुलो मात्र हो, त्यसैले यसलाई ठुलो रूपमा निषेध गर्न निषेध गरिन्छ। यात्रीहरूको लागि जसले अझै पनि पानीमा डुब्न निर्णय गरेको छ, त्यहाँ यहाँ एक विशेष ठाउँ हो, त्यसैले तपाईं यसलाई शान्तमा जान सक्नुहुन्छ, र चट्टानहरूबाट जोगिन सक्नुहुन्न।
तथ्यको लागि तयार रहनुहोस् कि किनारमा कपडे परिवर्तन गर्न कुनै क्याबिनहरू छैनन्। ठीक छ, वरिपरी घने थोरै टिकटहरू छन् जुन वरपर वरपर तपाईं कपडा परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ।
ताल टरिरिवा माछा फेला परेन। यो सामान्यतया एक मृत तालाब हो, जसको पानीमा कुनै जीवित जीवहरू छैनन्। स्थलहरु को परिमिति को आसपास पर्यटकहरु को मार्गहरु र खड़ी राहहरु लाई राखीएको छ, जसको साथ तपाईं बस हिड सकते हो या विभिन्न कोणबाट सुन्दर तस्वीरहरू बनाउनुहोस्। औसत उत्तेजना लगभग आधे घण्टा लाग्छ।
Tritriva मा जानुहोस्
पैदल कार पार्कबाट सुरु हुन्छ, जहाँ तपाईं पोखरीको सुन्दर दृश्यहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। वरिपरि पाइनका रूखहरू जुन चौंका अमामाहरू, र छेउछाउ र उज्ज्वल चराहरू अद्भुत गानाको साथमा छन्। यहाँ तपाईं पिकनिक प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, ध्यान दिनुहोस् वा बस आराम गर्नुहोस्।
झील वरपर इलाकामा तपाईले घरपरिवारको स्मृति चिन्ह प्रस्ताव गरी स्थानीय बच्चाहरु र विक्रेताहरू भेट्न सक्नुहुनेछ: शिल्प, क्रिस्टल, आदि। मूल्यहरू किफायती छन् तर सामान सुन्दर छन्। वैसे, व्यापारीहरु धेरै घुसपैठजनक हुन सक्छन् र पर्यटकहरु लाई ऊँची एड़ी को पछि जाने पछि, यदि उनि निर्णय गर्छन कि तपाईं उनलाई केहि केहि खरीदना चाहते हो।
जलाशय को प्रवेश द्वार गरिन्छ र लगभग $ 1.5 प्रति वयस्क, बालबालिका निःशुल्क छ। यस अवस्थामा, तपाईंलाई एक गाइड दिनुपर्दछ, जसको सेवा लगभग $7हो।
तालाब को मूल काफी फिसलन छ, त्यसैले तपाईं संग आरामदायक जूता र कपडे ले लो।
झील ट्रिटिविया नजिकैको अट्सिराबे नजिकैको सहरमा दूरी मात्र 10 किमी छ। तर सडक धेरै खराब छ र यात्रा एक घण्टा सम्म लाग्छ। D 2-3 किलोमिटर साना गाउँहरू छन्। तपाईं सडक संख्या 34 वा ACCESS vers tritriva मा कार द्वारा तालाब पुग्न सक्नुहुन्छ।
क्रिश्चियन चर्च (प्होहोक)
प्युमसस बोटानिकल गार्डन
Tshehlanyane नेशनल पार्क
प्रिटोरिया कला संग्रहालय
महिला कोट - शरद ऋतु-सर्द 2015-2016
एरिथ्राज्मा - उपचार
कानको पछि एथेरामा
छालाको उमेरको पहिलो संकेत
फेब्रुअरी 23 मा महसुस गर्न के लागी - विचारहरु
उष्णकटिबंधीय द्वीपहरु, बर्लिन
बालकनी दरवाजा संग रसोईघर मा पर्दे
पेललेटहरूसँग ड्रेस गर्नुहोस्
Digoxin - प्रयोगको लागि संकेत
दही पेस्ट्रीको रोल
दाँत निकासी पछि तापमान
आफ्नै हातले छालाको सामान
सालगिरहको लागि प्रतियोगिता "टोपी, विचारहरू पढ्दै"
क्याम्पो डेल मोरो
शरीरमा विनेहेडहरू - कारणहरू
गर्भावस्थाको समयमा चोकरी प्रिन्स
छालाका पन्जाहरू कसरी धुने?
पन्डोराको बक्स - के पन्डोराको बक्समा के छ र यो के हो?
बहुभाषी क्यान्सर - कसरी गर्भवती हुन्छ?